တံဆိပ်၊ စိန်ခေါ်ဒင်္ဂါးများ၊ သော့ချိတ်များ၊ ရဲတံဆိပ်များ၊ ပန်းထိုးခြင်းနှင့်ယက်ထားသည့်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၊ ချည်မျှင်၊ ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဦး ထုပ်များ၊
စက်ရုံများမှစတုရန်းမီတာ ၆၄,၀၀၀ ကျော်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအလုပ်သမား ၂၅၀၀ ကျော်နှင့်စက်ရုံများမှနောက်ဆုံးပေါ်အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောကြွေအရောင်ထုတ်ပေးသည့်စက်များဖြင့်ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်များကိုအထူးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာအထူးကျွမ်းကျင်သော၊ ကြီးမားသောပမာဏတိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးဒီဇိုင်းများအတွေ့အကြုံရှိလုပ်သားများလိုအပ်သည် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စဉ်းစားဟန်ရှိသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုရည်စူးထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။
21-06-30 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
သားရေသည်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကျော်သမိုင်းနှင့်အတူသဘာဝထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းသည်လှပကျော့ရှင်းပြီးဘယ်တော့မှစတိုင်ကျခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သားရေသည်ခေတ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးအဆင့်မြင့်မြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Pretty Shiny Gifts သည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
Epaulet သည်အလှဆင်ထားသောပခုံးအပိုင်းအစသို့မဟုတ်အဆင်တန်ဆာဆင်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်လေယာဉ်မှူးစစ်တပ်၊ စစ်တပ်နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ Pretty Shiny Gifts သည်ဖောက်သည်များ၏ရွေးချယ်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးသောကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောသတ္တု၊ ချည်မျှင်၊ ယက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖောင်းကြွ PVC လက်ဆွဲပြားများနှင့်ပခုံးအမှတ်အသားများကိုထုတ်လုပ်သည်။ မင်းအတွက် ...
ဖခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကြင်နာခြင်း၊ ရိုးသားခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်း၊ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ ဖခင်များနေ့တွင်လက်ဆောင်အဖြစ်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်ခြင်းသည်သင်၏ဘ ၀ တွင်သူမည်မျှတန်ဖိုးထားကြောင်းပြသရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖေကလက်ဆောင်ပေးတာကိုဘယ်လိုကြိုက်သလဲ။ သူ့အကျိုးစီးပွားကို ဦး စားပေးခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
Multi-function Push Pop Bubble
21-06-08 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
Push pop bubble ကစားစရာများကိုရောင်းချပြီးပါကစျေးကွက်တွင်လျင်မြန်စွာဝင်ရောက်လာပြီးယခု ၂၀၂၁ တွင်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလူကြိုက်များသနည်း။ ပထမ ဦး စွာ fidget ပူဖောင်းကစားစရာများကို ၁၀၀% လုံခြုံသော silicone ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးပြန်လည်လျှော်နိုင်သည်။ အဆိပ်မရှိသော၊ လူနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုမည်သည့်ထိခိုက်မှုမှမဖြစ်စေပါ။
21-06-01 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
လက်ရာမြောက်တဲ့သတ္တုပုလင်းဖောက်တံကိုကြည့်နေပါသလား။ ဘီယာဖွင့်စက်အသစ်တွေလိုချင်ပါသလား။ ပျော့ပျောင်းသော PVC ပုလင်းဖောက်တံ၏တာရှည်ခံဝိသေသလိုပဲဒါပေမယ့် Non- အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပစ္စည်းကိုအီးယူစမ်းသပ်မှုအောင်ချင်ပါသလား? သင်ဒင်္ဂါးများကိုပုလင်းဖောက်တံဖြင့်ပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားသလော။ သေချာကြည့်သည်...
Pretty Shiny Gifts သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသတ္တုတံဆိပ်၊ အကြွေစေ့များ၊ pin တံဆိပ်များ၊ cufflinks နှင့်စိတ်ကြိုက်ခါးပတ်ကြိုးအမျိုးမျိုးကိုအမြဲပေးသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းကိုယ်ပိုင်ခါးပတ်ကြိုးများသည်ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများသာမကအမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ စုဆောင်းခြင်း၊ အထိမ်းအမှတ်၊ မြှင့်တင်ခြင်း၊
စိတ်ကြိုက်ရက်ကန်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ & Labels
စိတ်ကြိုက်ရက်လုပ်ထားသောပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်တံဆိပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်စွယ်စုံဖြစ်ပြီးအလွန်အိတ်များ၊ ဖိနပ်များ၊ ဦး ထုပ်များ၊ ကစားစရာများ၊ ကားများ၊ ပရိဘောဂနှင့်အ ၀ တ်အထည်များစသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တ ဦး တည်းသော ...
21-05-11 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက်လည်ပင်းကြိုး၊ ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲများအတွက်ကျောင်းမှကျောင်းသား & ID လမ်းကျဉ်း၊ အိတ်သိုင်းကြိုး၊ တံဆိပ်ဖဲကြိုး၊ ခွေး leash & ကော်လာ၊ carabiner နှင့်ကြိုးတိုတို၊ ဖုန်းသိုင်းကြိုး၊ ကင်မရာကြိုး၊ မျက်မှန်သိုင်းကြိုး, အားသွင်း ...
စိတ်ကြိုက် Lapel တံသင်နှင့်တံဆိပ်များ
21-05-05 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
Pretty Shiny Gifts သည်အရည်အသွေးမြင့်ထူးခြားသောရင်ထိုးတံဆိပ်များနှင့်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေး၊ သံ၊ သွပ်သတ္တုစပ်၊ သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ သံမဏိသံ၊ သူတို့အားလုံး q ...
အရည်အသွေးမြင့် Custom Cufflinks
Cufflink သည်အလှဆင်။ ချုပ်ထားသောအင်္ကျီနှစ်ဖက်စလုံးကိုစွဲစေရန်ဝတ်ဆင်ထားသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် buttonholes ရှိသော်လည်းရှပ်အင်္ကျီများသာအသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မြင့်မြတ်သောနှင့်ဖက်ရှင်လက်ကြယ်သီးတစ်စုံသည်အမျိုးသားများအတွက်အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Pretty Shiny Gifts သည်လူသုံးများသောကားများအတွက်စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သတ္တုကားအထိမ်းအမှတ်နှင့် ABS ကားတံဆိပ်များအတွက်လူသိများသည်။ သတ္တုကင်တံဆိပ်တံဆိပ်များကိုကြေးနီcloisonné၊ ဓာတ်ပုံတံဆိပ်ခတ်ထားသောကြေးနီသို့မဟုတ်အလူမီနီယံပျော့သောကြွေကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများနှင့်ချောဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပရိုမိုးရှင်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသော Fidget ကကစားစရာ
21-04-12 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ပျင်းသောအခါ ၀ မ်းနည်းသောစွမ်းအင်ထွက်ရန်လိုအပ်လား။ Pretty Shiny Gifts သည် Metal fidget spinners များ၊ ပလတ်စတစ် fidget ချည်ငင်များ၊ fidget ball များ၊ Rubik's cube, fidget roller, magnetic rings & fidget pens များသာမကပေါ့ပ်ပူဖောင်းအာရုံခံမွှေသောကစားစရာများကိုတွန်းအားပေးရုံသာမကရိုးရိုးချိုင့် ...